Anna Johansson - okunomsoco Sweden - isungule isimangaliso sangempela ezingaba sikhanyisa amakhandlela ukuletha ithemba ngisho kulabo besifazane (namadoda kakhulu) abaye despaired of ekulweni ukukhuluphala. enza adla kanjani?
Seven amacembe Ukudla - izinsuku eziyisikhombisa monodiets
indlela yokudla ehambisana nempilo Seven amacembe Anna - kuba izinsuku eziyisikhombisa, ngalinye elikwazi ungakwazi kuphela udle fike hlobo of dla. Ngamanye amazwi, umjikelezo mono-Ukudla, ezisiza umzimba hhayi kuphela ozahlanjululwa ubuthi, kodwa futhi ukubabulala amakhilogremu uyazondwa. Ngaphezu kwalokho, ukwenza ngokuvumelana zonke izincomo kungenzeka ukuhola yokuthi, ngemva osenyameni wezinsuku eziyisikhombisa uba umsekeli ehlukile ugesi, ngeke athole isisindo futhi.
Okudla "amacembe Seven" - lena umphumela kubahlinzeki ukuncipha. Anna wazicelela kuzo abantu okunzima kakhulu unamathele ethile amandla uhlelo futhi ahlale phezu ukudla. Ukuze wenze lokhu, kudingeka wenze imbali, okuzodingeka amacembe eziyisikhombisa wakubonakalisa usuku ngalunye ulubheka kokulahlekelwa Kilos owengeziwe. Le mbali ngeke uthole bedidekile, futhi ungakwazi ukuthi njalo ubone ukuthi zingaki izinyathelo kakade athathwe maqondana ngokuvumelana, ezempilo nobuhle.
Imigomo amacembe eziyisikhombisa
Ngakho, ake sibheke le eziyisisekelo imithetho nezimiso ukubambelela eziyisikhombisa amacembe indlela yokudla ehambisana nempilo Swedish okunomsoco:
Ngaso sonke isikhathi kwesisindo kufanele ngaphandle kusukela ekudleni ushukela kanye amaswidi (kuhlanganise itiye nezinye izinhlobo zophuzo).
Dedela ukudla yekhofi. Uma okhuthele ikhofi lover, ungakwazi ukukhokhela akukho engaphezu kweyodwa isiphuzo inkomishi ngosuku.
Kunconywa ukuba baphuze isamba angenamkhawulo amanzi kanye nanoma yimuphi zezinkambi engamakhambi.
Yidla ukudla kangcono ubilise, ibila, ukupheka for ezimbalwa, kodwa hhayi Fry.
Gwema pepper kanye seasonings okubabayo.
Futhi manje awubheke ukuthi kungenzeka futhi ukuthi ngosuku ukudla:
Ngosuku lokuqala - izinhlanzi. Noma yimuphi izinhlanzi nganoma iyiphi indlela nge izinongo kanye namakhambi. Ungakwazi ukupheka isobho, kodwa ngaphandle amazambane.
Ngosuku lwesibili uzokunika ezihlukahlukene imifino: salads yemifino, zucchini nezitini, iklabishi nezinye izitsha eziningi kuyokusiza ukuba uzizwe indlala.
Esesithathu isigcebe sembali - inkukhu. Ngalolu suku, ungakwazi ukukhokhela futhi inkukhu umhluzi, kodwa kuphekwe inkukhu ngaphandle kwesikhumba.
Ngosuku lwesine Sizokwenza okusanhlamvu. Ubilise iyiphi wokudla (emanzini), badle imbewu, bran, isinkwa. Uma ufuna, ungakwazi zithokozise kvas.
Ngosuku lwesihlanu yokudla udla ephansi fat cottage shizi. Isigaba nzima kakhulu, ngokubona neminye. Namuhla siyakwazi ukukhokhela ephansi fat yogurt kungabikho izithasiselo futhi ingilazi yobisi.
Usuku penultimate uzokunika ithele izithelo eziningi kunoma yiluphi uhlobo, kuhlanganise izithelo sweet omisiwe.
Ngalesi Anna Johansson eqeda ekudleni futhi kusikisela ibuyele ku ukudla okuvamile alandelayo 3-4 amasonto. Nokho, abantu abaningi, ukuncipha kulesi simiso, engeza olunye usuku, ukudedelwa okuthiwa, lapho namanzi.
Kudalwa yini ukwehla kwesisindo emzimbeni?
Uma sihlaziya ukudla eziyisikhombisa Anna amacembe, singabona ukuthi ngesisekelo le ndlela of kwesisindo akugcini nje babebeke izimiso of "izinsuku ngokuzila ukudla", kodwa futhi ehlukile ugesi. Phela, akukho okunye phambi kwethu, njengoba alternation amaprotheni nge izinsuku carbohydrate. Ngenxa yalokhu ungazizwa indlala yakho "iqhinga" umzimba uqala ukudla amanoni awo izinqolobane.
Yonke imikhiqizo ezisetshenziswa njengeziwusizo ukudla ukudla okungenayo aqukethe polyunsaturated futhi monozhiry ezingenziwanga lihlehliselwe "zigciniwe", futhi kubalulekile ukuze ulondoloze impilo impilo yakho.
okunomsoco Swedish lithembisa ukuthi izindlela zakhe kwesisindo ukukusiza ukuqeda 3.5 5 amakhilogremu ngemjikeleto ngamunye. Ngakho ukwenza Semitsvetik yakho bethu futhi sibe bahle!
Ukulimala iziphuzo energy: inganekwane noma zingenzeka ngempela?
Ukudla pancreatitis, amanyikwe: imenyu abadala kanye nezingane
Isikhafu-tube izinaliti: umdwebo elinemininingwane
Iyini imisebenzi yokufaka imali ebhange?